हजुरआमाको भान्छा मेरो विश्वविद्यालय
डा. अरूणा उप्रेती काठमाडौं, १० साउन
धेरै पत्रकार साथीले मलाई ‘पोषणविद्’ भन्ने पगरी भिराइदिएका छन् तर म पोषणविद् होइन ।
७ वर्षमा विवाहित तथा निरक्षर हजुरआमालाई विभिन्न दलहनले पेटमा ग्याँस उत्पन्न गर्छ भन्ने थाहा पक्कै थिएन तर दाल झानेर खाँदा स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ भन्ने ज्ञानचाहिँ थियो । यो ज्ञान पक्कै उहाँले आफ्नी सासू वा जेठानीबाट सिक्नुभएको थियो होला । उहाँहरुले पकाएको देख्नुभएको थियो । उहाँले व्यवहारमा लागू गर्नुभयो र त्यही मेरा लागि विश्वविद्यालय बन्न पुग्यो । दाल झानेर खानुपर्छ भन्ने व्यावहारिक ज्ञान पाएँ ।
सानोमा स्कुल जाने चलन थिएन त्यसैले म ६ वर्षसम्म दिनभर हजुरआमासँग नै हुन्थें । बिहानपख एक जना गुरु अमला चपाउँदै पढाउन आउनुहुन्थ्यो । ६ वर्षसम्म घरमा पढेपछि म एकैचोटि कक्षा २ मा भर्ना भएकी थिएँ ।
घरमा गुरुले पढाएपछि म दिनभर चराजस्तै स्वतन्त्र हुन्थें । र, हजुरआमा जहाँ जानुहुन्थ्यो, म उहासँग त्यहीँ जान्थे । हजुरआमाले काेसेलीका रूपमा बारीमा फलेका तरकारी वा किनेर अम्बा लैजानुहुन्थ्यो, त्यो अम्बा काटेर कहिले देलान् भनेर आशा गरिरहन्थें ।
त्यहाँ हलुवा पकाएर दिँदा मेरो मन प्रसन्न हुन्थ्यो । हलुवा र चियाको खाजाजस्तो त संसारमा अरु के होला र, जस्तो लाग्थ्यो । घिउमा पकाएको सुजी वा गहुँको खाजा त ऊर्जाको स्राेत रहेछ । त्यसमाथि पनि नरिवल हालेपछि कति फाइदा, फाइदा !
पाहुना हामीकहाँ आउँदा बज्यैले चाहिँ घिउमा तारेको आलु र भुटेको चिउरा दिनुहुन्थ्यो । हजुरआमाले बनाउँदा म पाहुनाको वरिपरि घुमिरहन्थें, घिउमा भुटेको आलुको टुक्रा खान पाइन्छ भनेर ।
म सानी मान्छे, यताउता गरिरहँदा पाहुनाले प्लेटमा चार टुक्रा भुटेको आलु खान दिनुहुन्थ्यो । म खान्थें। त्यो स्वाद अझै जिब्रोमा नै छ ।
हजुरआमाको भान्छामा विभिन्न परिकार बन्थे । ती घरेलु परिकार खाएर हुर्केकी मैले सिकें, घरको खाजा उत्तम ।
उसिनेको भटमास, सुक्खा रोटी र चनाको तरकारी यस्तो त अहिले जति पनि बनाउन सकिन्छ । तर, यस्तो खाजा बिर्सिएर नानीहरुलाई पाेषणहीन खाना खुवाउँदा कुपोषण भएको देख्दा अचम्म लाग्छ ।
हजुरआमाले मास र गहतको मिश्रण गरेर गहतानी पकाउँदा बडो मेहनत गर्नुपर्थ्याे । मास भिजाएर सिलौटामा पिसेर फलामको भाँडामा पकाउनुहुन्थ्यो। त्यसमा डुब्का अर्थात् मासको फुलौरा हालेर आगोमा पकाउँदा गहतानी उम्लिरहन्थाे, याे कहिले पाक्ला र भातसँग ग्वामग्वाम खाउँला जस्तो लाग्थ्यो ।
कुनै पनि बिहान वा पूजामा घरमा भोज हुँदा गहतानी त पाक्थ्यो नै । ल्वाङ र सुकमेल हालेर जिम्बुले झानेकाे गहतानी मेरी हजुरआमाको हातको स्पेसियालिटी थियो ।
मेरी आमाले पनि त्यस्तै बनाउनुहुन्छ । गहतानी बनाउँदा हजुरआमाले हात मात्र लगाए पनि त्यो स्वादिलो बन्छ भन्ने चलन थियो कालिकास्थानमा ।
हजुरआमाको हातको गहतानी जिब्रोको स्वाद मात्र होइन स्वस्थ पनि रहेछ भने कुराचाहिँ मलाई धेरै पछि मात्र थाहा भयो । मास र गहतको दाल प्रोटिन लोहतत्त्व क्याल्सियम र अनेक शुद्ध तत्त्वको भरिपूर्ण हुँदा रहेछन् ।
मिश्रण गरेर फलामको भाँडामा पकाउँदा त फलाम पनि गहतानीमा जाने रहेछ, त्यो गहतानी पाकेपछि अलिकति अमिलो हालेर स्वाद बढाउने चलन छ अनि त्यसले गर्दा अमिलोको भिटामिन सी ले फलामको भाँडामा पकाएको गहत र मासको गहतानीमा रहेको लौहतTत्व शोषण गर्न झन् मद्दत गर्दाे रहेछ ।
यो गहतानीको स्वाद र स्वास्थसँग रहेकाे सम्बन्धबारे मैले कुनै किताबमा पढेकी छैन ।
गहतानी र भातमा अलिकति घिउ हालेर दिने मेरी हजुरआमालाई थाहा थिएन । चिल्लोको उपस्थितिले शरीरमा भिटामिन ‘ए’, ‘डी’ र ‘के’ धुल्न मद्दत गर्छ तर भातमा हजुरआमाले घिउ हालेर गहतानीसँग मुछेर खाँदा त म सानैदेखि स्वस्थ पो बन्न पुगेछु ।
हजुरआमाको भान्छा त औषधिको ‘मेडिकल शप ’ नै रहेछ भन्ने कुराचाहिँ म अहिले विश्लेषण गर्छु ।
मैले वर्षाको बेलामा फोहोर पानीमा मज्जासँग खेलेपछि खुट्टाभरि घाउ हुन्थ्यो । पिप भरिन्थ्यो । दुखेर म रून्थें, हजुरआमा मनतातो पानी र नुनले घाउ धोएर पिप भरिएको फोका फुटाउन सियो आगोमा पोल्नुहुन्थ्यो र सफा गरेर घिउमा बेसार मलेर खुट्टामा लगाइदिनुहुन्थ्यो ।
बेसार पानीसँग मात्र घोलेर लगाउँदा छालाले राम्रोसँग शोषण गर्दैन भन्ने ज्ञान हजुरआमासँग थियाे । यो ज्ञानचाहिँ मैले ३० वर्षको उमेरमा धेरै पढेपछि मात्र थाहा पाएँ, बेसार शरीरमा दल्दा चिल्लो चाहिन्छ नै यसैले बारम्बार भन्ने गर्छु, परम्परागत ज्ञानले भरिपूर्ण मेरी हजुरआमा पोषणको ज्ञान दिने विश्वविद्यालय हुन् ।
हजुरआमाले बनाउने अर्काे मीठो कुरा थियो, अमिलो मोहीमा बेसन हालेर बनाउने कढी । त्यसमा बेसनकै फुलौरा भएपछि त हामी केटाकेटी झन् लोभिन्थ्यौं । बेसन र मोहीको कढी फलामको भाँडामा पकाइन्थ्यो र पाकेपछि हरियो वा रातो खुर्सानी, जिम्बु र जिरा हालिन्थ्यो । वाह ! कस्तो मीठो हुन्थ्यो ।
अमिलो मोही हालेर पकाएपछि त बेसनमा रहेको प्रोटिन र मोहीको गुण त भइहाल्यो, त्यसमा फुलौरा परेपछि त भात दुई गाँस बढी खाइन्थ्यो । म धेरै भात खान सक्ने हुनाले मेरो नाम नै ‘भैंसी’ थियो ।
कढीलाई अहिले मैले केही परिमार्जन गरेर अमिलो मोहीमा कोदो, फापर, चामल र अलिकति हरियो तरकारीकाे मसिनो टुक्रा हालेर पकाएपछि त यो आफैंमा पूर्ण भोजन बन्छ ।
यो सुप खाएपछि त मलाई भातरोटी केही खानैपर्दैन । यसले मैले खाने क्यालोरी पनि कम भइहाल्छ । यस्ता थुप्रै रिसिपीु खाएर हुर्केकी म भन्छु, ‘मेरी हजुरआमा हुन् मेरो पोषणको विश्वविद्यालय ।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १०, २०७६, १९:३४:००